Cách trồng Lan Dendro "siêu đơn giản" cho người Yêu cảnh | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cách trồng Lan Dendro “siêu đơn giản” cho người Yêu cảnh | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cách trồng Lan Dendro “siêu đơn giản” cho người Yêu cảnh | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Lana Dendro iyintyatyambo emangalisayo, ayizisi ubuhle kuphela endlwini, kodwa le ntyatyambo ikwazisa intsingiselo eninzi ebantwini. Ukukwazi ukukhulisa i-dendro orchid entle eqhakaza akunzima njengoko abantu becinga.
Namhlanje, makhe Fao funda malunga indlela yokukhulisa i-dendro orchids kwakunye nendlela yokunyamekela le ntyatyambo imangalisayo!
1 Ziziphi iimpawu ze-orchid dendro?
2 Indlela yokukhulisa i-dendro orchids
2.1 1. Uyilo lwegadi yokukhulisa iDendro .orchids
2.2 2, Iimeko zobushushu xa kukhula i-orchids iDendro
2.3 3, iimeko zokukhanya xa ukhula iDendro orchids
2.4 4, ukufuma okuyimfuneko xa ukhulisa iiorchids iDendro
2.5 5, iqondo lokuphefumla
3 Ungayikhulisa njani iDendro orchids
3.1 1, Khetha iintlobo ze-orchid iDendro
3.2 2, Lungisa indawo yokukhula yeorchid Dendro
3.3 3, Lungisa izithole
3.4 5, Tyala iDendro orchids kwindawo yokugcina abantwana
4 Indlela yokunyamekela i-orchids Dendro
4.1 1, iimeko zokukhanya xa ukhathalela i-orchids Dendro
4.2 2, Iqondo lobushushu kunye neemeko zokufuma xa ukhathalela i-orchids Dendro
4.3 I-3, imo yokunkcenkceshela xa ukhathalela i-orchids Dendro
4.4 4, Chuba xa uhoye iiorchids iDendro
4.5 5, Ulawulo lwezinambuzane xa unyamekela iiorchids iDendro
Ziziphi iimpawu ze-orchid dendro?
Lana dendro Igama lezenzululwazi yiDendrebium, olu luhlobo lomthi kwintsapho ye-Orchidaceae, equka ngaphezu kwe-1,600 yeentlobo ezahlukeneyo ze-orchids, zisasazwa kwiindawo ezitshisayo, ngakumbi kuMzantsi-mpuma we-Asiya naseOstreliya.
Enyakeni, lo mthi uvelisa iintyatyambo ezininzi ezahlukahlukeneyo, ngoko abantu badla ngokuwusebenzisa ukugawula amasebe. Uhlobo ngalunye lwe-orchid ye-Dendro lunemozulu eyahlukileyo, ezinye iintlobo zifanelekile kwiindawo ezibandayo, ezinye iintlobo zifanelekile kwiindawo ezishushu kunye nezifumileyo.
Indlela yokukhulisa i-dendro orchids
1. Uyilo lwegadi yokukhulisa iDendro .orchids
a, Ulwalathiso lokukhula kweorchid Dendro
Kuyilo lwegadi yokukhulisa i-dendro orchids, ukukhetha icala le-orchid rig linyathelo elibaluleke kakhulu, elichaphazela ngokuthe ngqo ukufunxwa kokukhanya kunye nokukhula kwesityalo.
Okwangoku, kukho i-nayiloni emnyama ye-nayiloni enesiphumo sokuchitha ubushushu kunye nokunciphisa ukukhanya kwelanga, ethengiswa kakhulu kwimarike, ngoko ke kulula kakhulu ukuyila isikhokelo se-truss.
b, Truss isakhelo ukukhulisa Dendro orchids
Ukuze ube ne-orchids ye-Dendro enempilo kwaye ephilileyo, kuyimfuneko ukwenza isakhelo esomeleleyo kakhulu.
c, Truss stand
Iintsika ezimileyo kufuneka zakhiwe ngentsimbi okanye ikhonkrithi ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha kunye nokwandisa ubomi beentsika. Inokuthi tye okanye ime nkqo ukuyenza izinze ngakumbi. Ipali kufuneka ibe malunga ne-3 ukuya kwi-3.5m ukuphakama ukuqinisekisa ukukhula kweentyatyambo.
d, i-Sunshade xa ikhula iDendro
Umthunzi welanga ufana nomaleko we-sunscreen, oyimfuneko kule ntyatyambo, isetyenziselwa ukuthintela ukukhanya kwelanga. Ngokuqhelekileyo yenziwe nge-nayiloni ye-nayiloni kwaye le mveliso ilula kakhulu ukuyisebenzisa.
Ukuxhoma i-orchids, kungcono ukhethe i-trellis eyenziwe ngetsimbi ecocekileyo okanye uyixhome ngecycad, i-bamboo okanye umbhobho wamanzi ojikelezayo ukuze udibanise imbiza ye-orchid. I-truss ejingayo imalunga ne-1.8m ukuphakama ukuze kube lula ukuhamba, ukutyelela kunye nokukhathalela umthi ukunqanda ukubetha intloko.
Xa kuxhonywa iingobozi zeeorchids, kufuneka zixhonywe iingqayi ezinobude obufanayo, iihangers zeeorchids nazo kufuneka zibe nobude obulinganayo kwaye zityalwe ngexesha elifanayo, kunye nohlobo olufanayo lwe-orchids ukunyamekelwa lula, kunye nokukhula okungcono. Ukuze ube nendlela yobuhle, umyezo ukhangeleka unobunewunewu kwaye uhle, kufuneka uxhome i-orchid ngendlela echanekileyo.
f, Iishelufa zeeorchids
Sifanele sibe neshelufu malunga ne-0.8m ukuphakama kunye nomngxuma wokudibanisa ibhodwe, ngoko akufanele sichithe iigwegwe zokuxhoma kunye nombindi we-truss, ngaphezu koko, unokongeza iimbiza ezininzi.
2, Iimeko zobushushu xa kukhula i-orchids iDendro
Iintyatyambo zeDendro zikhula kakuhle kwiindawo ezishushu. Emini, ubushushu buvela kwi-27 ukuya kwi-320 degrees Celsius, ebusuku ukusuka kwi-16 ukuya kwi-180 degrees Celsius kwaye ngakumbi, i-orchids ye-dendro iya kuba sengozini yokuchithwa kwe-defoliation xa ubushushu buphantsi kakhulu.
3, iimeko zokukhanya xa ukhula iDendro orchids
Ukukhanya okufunwa yile ntyatyambo kukhulu kakhulu, malunga ne-70% yokukhanya kwelanga efunekayo ukuze intyatyambo ikhule kakuhle. Nangona kunjalo, ukukhanya okukhulu kuya kubangela ukuba isityalo sitshise kwaye sibe ne-blister. Kwaye xa kungabikho ukukhanya, isityalo siya kuba sigula ngakumbi nangakumbi, amaqabunga amancinci, iintyatyambo ezincinci kwaye zingabi neentyatyambo.
4, ukufuma okuyimfuneko xa ukhulisa iiorchids iDendro
IOrchid Dendro idinga malunga nama-50 ukuya kuma-80% ukufuma ukuze ikwazi ukuzondla.
5, iqondo lokuphefumla
Ubume bendawo buhlala bufumile, bupholile kwaye bungena umoya, ngoko kulula ukukhula ii-orchids. Ngamanye amazwi, naphi na apho kukho indawo, kunokwenzeka ukwenza iiorchids. Ukugcina i-orchid ifumile, ungayenza nge-sprinkler, amanzi amaninzi ukugcina isityalo simanzi, njl.
Ungayikhulisa njani iDendro orchids
1, Khetha iintlobo ze-orchid iDendro
Ukuphumelela nge indlela yokukhulisa i-dendro orchids Kule meko, kufuneka ukhethe iintyatyambo ezisikiweyo kunye nezinye iintlobo zokuhlobisa ezidumileyo kwiimarike.
Ungabhekisa kwiintyatyambo ezisikiwe ngenkuthalo ezifana ne: Dend. Aridang Green, Dend.Somlak White 5N, Dend.Sonia Esakul Dend. Sonia White, … Ngaphandle koko, ezinye iindidi zeDendro zihlala zisetyenziselwa ukuhombisa ezinje: Ceasar Green, Nona Red, Den.Burana Charming, Burana Gold, …
Iindidi ezinelanga zeDendro ezisetyenziselwa ukuhombisa ezifana ne: Dend. Kesare White, Dend. UKesare ubomvu, uDend. UKumkani uHoc Mon, eDend. Pinki, Dend. White Lady Willow, Dend. Uzipho lukaDragon, Dend. Iphimpi…
2, Lungisa indawo yokukhula yeorchid Dendro
Ungasebenzisa iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokukhulisa i-Dendro orchids kwinqanaba le-nursery, kodwa enye yezona ndlela zilungileyo zezi:
I-coco peatICoco peat yimveliso eyenziwe xa kuculwa amaqokobhe ekhokhonathi ukufumana icoir. Yindawo enemingxuma phakathi kwemicu yecoir. Ngaphambi kokutyala, kufuneka uphathwe nge-acrid (tanin).
Ukusingatha le nto, siyenza ngokucwina kunye nokukhupha, ixesha lokunyanga livela kwiintsuku ezi-7 ukuya kwezi-10 (ngeli xesha ukukhupha amanzi acacile) ngaphambi kokutyala.
Iqokobhe leKhokhonathi: Kufuneka ukhethe amaqokobhe amadala, owomileyo wekhokhonathi (iqokobhe langaphandle limdaka, liqinile lekhokhonathi) ukwenza ukukhula kubephakathi. Ngokufana nokunyangwa kwe-coco peat, ngaphambi kokutyala kuyimfuneko ukuphatha i-acrid.
Emva kokuntywila, qhubeka unqumle ube ziziqwenga (1x2x4 cm) kwaye utyumze ukudala ukuthamba kunye nomoya, ukunceda iingcambu zikhule kakuhle, oko kuya kwenza ukutyala i-orchids yeDendro ibe lula ngakumbi.
3, Lungisa izithole
Ukuze izithole zihanjiswe ngaphandle kwebhotile, izicubu kufuneka zigcinwe ubuncinane iiveki ezi-2 kwiimeko ezipholileyo ngaphandle kokukhanya okuthe ngqo ukunceda isityalo sivumelane ngokuthe ngcembe kwiimeko zendalo ngaphandle.
Imigangatho yezithole xa iphumile kwiibhotile zethishu:
Xa izithole ziku-4 ukuya kwi-5 cm ubude nangaphezulu (kulinganiswa ngobude bamagqabi).
Amagqabi achame, omelele, akakhubazeki kwaye aluhlaza ngombala.
Ubude bengcambu bumalunga ne-2cm, iingcambu ezomeleleyo, ezineengcambu ezi-5 okanye ngaphezulu kwaye akukho ngcambu ezonakeleyo.
Izityalo zikhula, zikhule kakuhle, azisuleleki ngezifo eziyingozi.
4, Ubuchwephesha bokuvelisa izithole xa kukhula i-dendro orchids
Ukufumana izithole ebhotileni, ungasebenzisa iintsimbi ezincinci okanye iigwegwe zensimbi ezingenasici kunye ne-clamps. Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba usebenzise i-hook encinci kuba ikhawuleza, idibene kwaye ingonakalisi kancinci emthini kune-clamp.
Okokuqala faka amanzi amancinci kwibhotile yethishu, uvuthulule ngobunono ukukhupha umaleko wejeli, emva koko usebenzise ikhonkco yentsimbi ukutsala ngobunono isityalo ngasinye ngaphandle kwebhotile (nikela ingqalelo ukujikelezisa isiseko ukuya emlonyeni webhotile), ukunqanda. ukwenzakala kumagqabi amancinci.
Emva kokukhupha izithole, kufuneka ziwise ngokukhawuleza embizeni yamanzi, zihlanjwe ngobunono de iingcambu zingasabonakali, emva koko zibeke kwibhasikithi yeplastiki ukuze zikhuphe.
Iingcambu ezonakalisiweyo, amagqabi kunye nezityalo okanye izityalo ezonakalisiweyo kufuneka zisuswe ngexesha lokuhlamba ukuphepha ukusasaza isifo kwezinye izityalo kunye nokufezekisa eyona ndlela ilungileyo yokukhulisa i-Dendro orchids.
Emva koko, yahlula ngokobukhulu (ukuze ikwazi ukuhoywa kamva) kwaye ulungelelanise izithole kwitreyi okanye kwibhasikithi yeplastiki (ubukhulu obuyi-30x50x15 cm) ikhatshwa ngumaleko obhityileyo we-coco peat ukugcina izityalo zifumile. i-nursery okanye ibekwe kwi-nursery egqunywe ngumaleko we-coco peat ukusuka kwi-10 ukuya kwi-15 cm ubukhulu.
5, Tyala iDendro orchids kwindawo yokugcina abantwana
Ukufumana Ungayikhulisa njani iDendro orchids Ngokwemigangatho yobugcisa, xa ushiya i-nursery, izityalo kufuneka zigcinwe kwi-rig kwi-1 ukuya kwiiveki ezi-2 zoqeqesho, de kube iingcambu zimhlophe ezimhlophe, zingatyalwa. Sebenzisa imbiza yeplastiki emnyama xa kutyalwa, enobude obuyi 1.5 intshi (3.4cm).
Okulandelayo, usebenzisa iqhekeza leqokobhe lekhokhonathi elinqunqiweyo, beka izithole phakathi kweqokobhe le coconut ukuze ingcambu yengcambu yezithole ibe yi-1 ukuya kwi-2 mm ngaphezu komphezulu wecoir ukunqanda amanzi amileyo.
Ekugqibeleni, faka izithole ebhodweni ukuze iqine ngokwaneleyo (iqinile kakhulu iya konakalisa iingcambu kwaye ikhululeke kakhulu kwaye izithole ziya kuwa). Xa ugqibile ukutyala, beka isityalo kwitreyi yeplastiki enemingxuma eyi-112. Kuyimfuneko ukulungiselela ukuxinana ngokuthe ngcembe ukuqinisekisa ukuba izityalo zifumana ukukhanya okwaneleyo ukunceda izityalo zikhule kwaye zikhule kakuhle.
Indlela yokunyamekela i-orchids Dendro
1, iimeko zokukhanya xa ukhathalela i-orchids Dendro
Ngenxa yokuba isityalo sithande ukukhanya kakhulu, xa isityalo sikhulile, ngakumbi inqanaba leentyatyambo, kufuneka sivumele isityalo sifunxe i-100% yokukhanya.
Okukhona ukukhanya kubonakaliswe kuyo, isityalo siya kuba sempilweni kwaye iintyatyambo ziya kuba zihle. I-orchid nganye enelanga ye-Dendro inobude obuphakathi kwe-50 ukuya kwi-150 cm kwaye ine-pseudobulbs ezili-10 ukuya kwi-15.
2, Iqondo lobushushu kunye neemeko zokufuma xa ukhathalela i-orchids Dendro
Imigca yakudala enelanga yeDendro orchid ifanelekile kwizikhombisi zokusingqongileyo:
Ubushushu: Imini ukusuka kwi-80 ukuya kwi-90F (27 ukuya kwi-32C), ubusuku abufanele bube ngaphantsi kwe-50F (10C).
Linelanga: Kufuneka ilanga elininzi, kodwa kufuneka ube nenetha yokuvala umthi ukunqanda ukutshisa kunye nokusabalalisa amagqabi.
Ukufuma: Uluhlu oluphakathi ukusuka kwi-60 ukuya kwi-70%.
I-3, imo yokunkcenkceshela xa ukhathalela i-orchids Dendro
Kuba Indlela yokunyamekela i-orchids Dendro Ukuze oku kusebenze kakhulu, kufuneka sinikeze ukufuma okufanelekileyo kwesityalo. Ingakumbi izithole zifuna malunga nama-70 ukuya kuma-75%. Kumjikelo wokunakekelwa kwezithole, ukufuma kubaluleke kakhulu, ukuba unkcenkceshelwa kakhulu, iingcambu ziya kuba lula ukuba zibe namanzi, izityalo ziya kuba tyheli kwaye zicothe ukukhula.
Ngaphandle koko, ukuba kukho ukungabikho kokufuma, iingcambu ziya kukhula kakubi, zinciphisa ukufunxa izondlo. Amanzi okunkcenkceshela izityalo akafuni ukuba netyuwa, ialum, aqine (aqulathe iiyoni ezifana neCa2+, Mg2+,…), ine-pH egqwesileyo ukusuka kwi-5.5 ukuya kwi-6.8.
Xa unkcenkceshela izityalo, kubalulekile ukuba ubeke ingqalelo kulo mgaqo ulandelayo: Ukunkcenkceshela ukudala umswakama ojikeleze indawo ekhulayo (ukunkcenkceshela i-arch ejikelezayo ejikeleze umthi) kuya kuba ngcono kunokunkcenkceshela kwendawo kwindawo embizeni okanye phakathi.
Amanzi kuphela kufuneka anikwe ukufuma okwaneleyo kwizityalo, kufuneka ankcenkceshelwe kusasa okanye ngorhatya, kuthintelwe ukunkcenkceshela emini enkulu xa kushushu okanye emva kwexesha, ukwenza izityalo zichaphazeleke zizifo.
Ngaphandle koko, unokongeza ukunkcenkceshela phezu kophahla okanye phantsi kwe-nursery ukwandisa ukufuma, ukunciphisa ubushushu be-nursery, njl njl. Unokwandisa amaxesha okunkcenkceshela ngosuku ngokuxhomekeke kwiimeko zemozulu ukuze izityalo zikhule kakuhle.
4, Chuba xa uhoye iiorchids iDendro
Ukunkcenkceshela: Ehlotyeni, ukunkcenkceshela kufuneka kube kuninzi, kugxininiswe kakhulu ngenxa yokuba ngeli xesha izityalo kufuneka zixhomekeke rhoqo, ukukhanya kwelanga elibi kunye nokushisa okuphezulu kwe-nursery. Ukususela kwixesha lokuhluma komthi ukuya ebudaleni, chumisa kanye ngeveki ngesichumiso se-30-10-10,
Indlela yokulungisa umgquba?: Yongeza i-½ itispuni yephosphorus kwiilitha ezi-4 zamanzi. Ngo-Agasti noSeptemba, tshintshela ekusebenziseni isichumisi se-10-30-10, amanzi amancinci kakhulu kwaye uyeke ukuchumisa ebusika.
5, Ulawulo lwezinambuzane xa unyamekela iiorchids iDendro
Kwakhona ngenxa yokuba i-orchids ye-Dendro kufuneka ikhathalelwe ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zezichumisi eziphilayo kunye nemekobume ye-coir iya kubola emva kwexesha elifutshane lokutyalwa, enokuthi ibe neemeko ezibangela ukuba izinambuzane ezininzi kunye nezifo zonakalisa isityalo. i-millipede eluma iingcambu phakathi.
Kumphezulu wamagqabi kuhlala kuvela i-aphid encangathi emthubi, ubukhulu buncinci kakhulu, malunga nencam ye-toothpick. Olu hlobo luyawonakalisa umthi ngokufunxa incindi.
Ukujongana nezinambuzane eziluma iDendro kulula. Singasebenzisa kunye neBassa, i-Serpa yoxinaniso 1/500. Nangona iDendro isisityalo esikwaziyo ukumelana nezifo, ukuba iimeko zococeko zimbi kakhulu, umthi usahlaselwa ngumngundo kunye neentsholongwane.
Eyona nto iyingozi kakhulu yi-rhizome kunye nesifo se-pseudobulb esibangelwa yintsholongwane ehlaselayo, ebangela ukuba ii-pseudobulbs zome kwaye zife. Esi sesinye sezizathu zokuba umthi ukhule izithole phezu kwesiqu.
Ngeengxaki ezingentla, kufuneka uthintele izifo kunye nokunyamekela iiorchids iDendro ngokutshiza kanye ngeveki ngamachiza antifungal ezifana Zineb, Topsil, Bencmyl ngoxinaniso 1/400.
Ngoko siye safunda malunga indlela yokukhulisa i-dendro orchids njengoko indlela yokunyamekela le ntyatyambo intle. Ngeli nqaku, Fao Ndiyathemba ukuba uya kukwazi ukukhulisa imbiza entle yedendro ngokwakho kwisitiya sakho. Umnqweno omhle!
Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Lưỡi Hổ Luôn Xanh Tốt | Hatgiongtihon.net